एक कार ब्याट्री सही कसरी चार्ज गर्ने?
हाम्रो कार - यो हामी अर्को एक बिन्दुबाट सार्न जो सिर्फ एक माध्यम हो। धेरै को लागि, कार - यो गर्व, स्थिति सूचक एक कुरा छ, क्षमता ठूलो स्वरमा नै वा पुरुष / स्त्री व्यर्थ मनोरन्जन गर्नु एउटा बाटो घोषणा गर्न। ट्युनिङ, airbrush, अडियो र विज्ञान कल्पना, बाध्य प्रेरणा इन्जिन, सह-वर्तमान, स्पोइलरहरूबाट र अन्य "विजेट" को एक गुच्छा को कगार मा भिडियो - यो सबै प्रशंसक एक निश्चित वर्ग लागि जीवन शैली छ।
त्यहाँ हजार सदाबहार एकाइहरूको कुनै पनि ईन्जिनियरिङ् Marvel लायक सयौं सुन्दर तर utterly बेकारी जंक को एक ढेर मा रूपान्तरित जो बिना सवारी साधनको भागहरु छन्। हामी कार ब्याट्री बारेमा कुरा गर्दै छन्। यसलाई सुरक्षित कार को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागहरु सकिन्छ। यो शान्त र unobtrusive कामदार हाम्रो फलाम मित्र को जीवन मा अल्फा र ओमेगा छ। यसले कम महत्त्वपूर्ण बनाउन गर्दैन - र हाम्रो कोमल र स्नेह बाँकी छन् उहाँलाई गरौं। कार ब्याट्री (अपवाद - एक मर्मतका-मुक्त ब्याट्री) को लागि उचित प्रयोग र समसामयिक हेरविचार हाम्रो आनन्दित र निर्मल चालक जीवनी को सबै भन्दा राम्रो ग्यारेन्टी हो।
के लक्षण आफ्नो कार को ब्याट्री समस्या संकेत हुन सक्छ?
मा ब्याट्री एक समस्या संकेत को साधन प्यानल।
इन्जिन चालु समस्या।
सञ्चालन समयमा चार्ज को कमी (एक शुल्क लिन छैन)।
ब्याट्री को धेरै छिटो छुट्टी।
केही मोटर चालकहरुलाई समस्या को 'रूसी पहेली "जो मा उनि उपलब्ध नयाँ ब्याट्री को कमीशन र कार्यका लागि भरोसा छ। यो सही छैन। त्यसैले एक कार ब्याट्री कसरी चार्ज गर्न विचार गरौं।
आउटपुट स्पष्ट - आफ्नो सवारी मर्मत-मुक्त ब्याट्री मोडेल प्रयोग गरिएको छ भने। तपाईंले खरिद र एउटा नयाँ स्थापना गर्न आवश्यक छ। प्रश्न उठ्छ: कसरी, कार ब्याट्री चार्ज गर्न भने बस स्टोर बाहिर आउन र मर्मतका-मुक्त छ थियो? नयाँ मर्मतका-मुक्त ब्याट्री विशेषज्ञहरु चार्ज व्यावसायिक कार सेवा अवस्था सुझाव दिन्छौं। त्यसैले सबैभन्दा विश्वसनीय।
तपाईं ब्याट्री काम कायम छैन भने - सिर्फ एक नयाँ उपकरण लागि दोकान गर्न समय लाग्न छैन। यसलाई "आगरणको" जीवन आफ्नो कार को बिजुली हृदय ल्याउनेछ भनेर एक श्रृंखला सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। आगरणको प्रक्रिया को लागि, तपाईं एक इलेक्ट्रोलाइट, distilled पानी, एक Hydrometer (नाप्ने लागि उपकरण आवश्यक हुनेछ को इलेक्ट्रोलाइट को घनत्व) र ब्याट्री चार्जर।
हामी कसरी स्मृति (चार्जर) मा केही शब्दहरू, एक कार ब्याट्री चार्ज गर्न विचार अघि। चार्जर (लोकप्रिय पनि भनिन्छ "rectifier"), यो एक कारखाना प्रकार किन्न र यस मा सुरक्षित सर्वश्रेष्ठ छ आवश्यक छैन - आत्म-गरे उपकरणको कम मूल्य भन्दा राम्रो तर्क छैन। खम्बा मा "स्वास्थ्य र दीर्घायु" आफ्नो नयाँ ब्याट्री छ विशेष गरी जब सस्तो छैन।
एक "rectifier" खरीद गर्दा काम गर्दछ जो संग भोल्टेज ध्यान। यो 12 वोल्ट, जो (मर्मतका-मुक्त ब्याट्री को चार्ज लागि) 16 वोल्ट वृद्धि गर्न सकिन्छ थियो मनमोहक छ।
कार ब्याट्री कसरी चार्ज गर्न:
उचित स्तरमा एक इलेक्ट्रोलाइट थप्न - आवश्यक छ भने, इलेक्ट्रोलाइट स्तर जाँच प्रत्येक बैंक मा। को इलेक्ट्रोलाइट विशेष मोबाइल पसलहरूमा प्राप्त गर्न मनमोहक छ, यो विक्रेता देखाउँदछ गुणस्तर प्रमाणपत्र, गर्न उपयोगी छ।
सबै ब्याट्री बैंकहरू उपलब्ध छन् जो ट्यूब, खोल्नुहोस्।
ब्याट्रि टर्मिनलहरु गर्न चार्जर जडान गर्नुहोस्।
नेटवर्कमा चार्जर जडान गर्नुहोस्।
उचित चार्ज वर्तमान मूल्य पर्दाफास: यो ब्याट्री क्षमता 10% बराबर (ब्याट्री क्षमता 55 amperes / घन्टा मा - चार्जर को एम्पीयरेज 5.5 amps हुनुपर्छ) मान हुनुपर्छ।
सही मात्रा मा शून्य भेट्नुपर्छ गर्न tends जो ब्याट्री चार्जर, मा चार्ज प्रक्रिया संकेत गर्छ।
को चार्ज भोल्टेज को अन्त र मा इलेक्ट्रोलाइट घनत्व जाँच गर्न आवश्यक छ। माप प्रत्येक जार मा गर्नुपर्छ। पानी distilled इच्छित स्तर बैंकहरू थप्न - आवश्यक भने।
प्रत्येक बैंक पूर्ण चार्ज ब्याट्री वोल्ट 1.7 र 1.8 को एक भोल्टेज देखाउनुपर्छ। भोल्टेज लोड काँटा प्रयोग जाँच गर्न सकिँदैन।
सुरुवात: कसरी पहिलो पटक एक कार ब्याट्री चार्ज गर्न
सेवा प्रदान नयाँ को ब्याट्री चार्ज प्रक्रिया अलि माथि प्रक्रिया भन्दा फरक चार्ज छ देखिन्छ। नयाँ ब्याट्री सामान्यतया dry- छ। यसको सञ्चालनको सुरु लागि पहिले बैंकहरू मा इलेक्ट्रोलाइट भर्नुपर्छ, र केवल घण्टा एक जोडी पछि चार्ज प्रक्रिया सुरु गर्न।
थप कार्यहरू चार्ज नियम मा वर्णन ती समान छन्। अब तपाईं राम्ररी कार ब्याट्री चार्ज गर्न कसरी एक विचार छ।
कसरी मिसिन मा सवारी र यसको विशेषताहरु के हुन्?
प्रहरी मा परीक्षा के हो?
वोक्सवैगन Corrado: विनिर्देशों र मोडेल विवरण
अगाडि बम्पर। उत्पादन र को विशेषताहरु
मास्को मा Novodevichy Convent, कहाँ? यस विहारको इतिहास
क्रीम क्रीम क्रीम: पकाउने प्रविधि। स्वादिष्ट ईक्लियरको लागि नुस्खा
तुला राज्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय: शैक्षिक स्तर र संकाय
एक सिंड्रोम Rokitansky-Otto Küstner - यो के हो? सिंड्रोम Rokitansky-Otto Küstner: कारण, लक्षण, उपचार
"Citroen C4" - पालकी 2013: मोडेल को एक सिंहावलोकन
रूस देखि भियतनाम सुझाव shopaholics के ल्याउन